Dr.Lammaa Magarsaa Maatii isaatiin waliin odoo gara USA deemaa jiraa Buufata Xiyyaaraa Idil-Addunyaa Booleetti qabamee jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDr.Lammaa Magarsaa Maatii isaatiin waliin odoo gara USA deemaa jiraa Buufata Xiyyaaraa Idil-Addunyaa Booleetti qabamee jira.
Wayta yaamamus Mummeen Ministeera Abiyyi akka barbaadu itti himuun fuudhanii deeman. Hanga ammatti maalirra akka gahame hin beekkamne.
Abiy Ahmed beellama koree bulchinsa yeroo naannoo Tigiraay waliin qabu irraa hafe. Walgahiin koree bulchinsa yeroo naannoo Tigraay akka milishaan Amaaraa fi loltootni Eertiraa Tigraay keessaa bahan marii’achuuf Bahaardaratti qabame sababa irraa hafuu Abiy Ahmediin hafee jira. Aangawootni bulchinsa yeroo Naannoo Tigraay Bahaardar galan aarii guddaa keessatti akka argaman Qeerroo Intelligence Group mirkaneeffateera. Abiy Ahmed naannoon Amaaraa daangaa dhiigaan qabadhe keessaa hin bahu jedhee waan dideef waan godhu dhabee akka hafe barameera.
Wal haa nyaattu
Dooniin waraanaa Amerikaa #The_Winston_Churchill jedhamtu buufata doonii sudaan irratti mull’achuun beekkamee jira.gama biraatiin Sudaanii fi Ijipti walii galtee Waraanaa waliif mallatteessun isaaniis dhaga’amuu ganama isiniif maxxanseen ture.
Amerikaanis ibsaa fi marii dhiimma nageenyaa itiyophiyaa ilaalchisee baasaa fi marii gochaa jirtu keessatti dhiimma Tigraayi qofa irratti kan xiyyeeffate ta’uun kunis dubbuma kanneeniin wal qabataa beekaa.Itiyoophiyaan hoo rakkoo akka biyyaatti muudachuuf afaan guutee as deemu kanaaf hatattamaan dhiimma siyaasaa keessoo kan gaaffii oromootin wal qabatee jiru kana furtee kan biyyaa kanaatti fuulleeffatti moo lameenuu wal faana ofirraa nan ittisa jettee yaada du’aa kana yaadaa jirti laata? Walumaan eegna.
KFOn filannoo 6ffaa biyyoolessaatti akka hin hirmaannee fi guyyaa kadhimamtoota itti dhi’eessan bor kan dhumatu sanatti nama tokka akka hin dhi’eessine ifa godhee jira.
Nutis galatoomaa jennaa KFOn